China Electro kpaliri ígwè waya eriri factory na-emepụta | Bangyi
Elu nke eriri waya a na-agbanye ígwè nwere ụdị abụọ: electro-galvanized na hot-dip galvanized. Electro-kpaliri ígwè waya waya bụ ugbu a kasị ọtụtụ-eji otu. Ọ nwere arụmọrụ dị oke ọnụ ahịa na uru ọnụahịa ka mma karịa eriri waya waya na-ekpo ọkụ. Ọ bụ wi
Elu nke eriri waya a na-agbanye ígwè nwere ụdị abụọ: electro-galvanized na hot-dip galvanized.
Electro-kpaliri ígwè waya waya bụ ugbu a kasị ọtụtụ-eji otu. Ọ nwere arụmọrụ dị oke ọnụ ahịa na uru ọnụahịa ka mma karịa eriri waya waya na-ekpo ọkụ. A na-eji ya eme ihe dị iche iche na ime ụlọ.
Usoro mmepụta nwere eserese waya, eriri na mmechi. Waya ịbịaru bụ ise a oké ígwè waya mkpanaka n'ime mkpa waya. Nddọ eriri bụ iji mepụta waya n'ime eriri, yana imechi bụ ịkpụgharị eriri n'ime eriri. Mgbe emechara usoro atọ a, ha na-enyocha nyocha dị mma, nkwakọ ngwaahịa, ma mesịa ghọọ ngwaahịa ikpeazụ
Ngwaahịa enweghị burr, enweghị eriri agbaji, agba na-agbanwe agbanwe na ọdịdị mara mma.
Ọ nwere ezigbo mmebi mmebi, nwere ike ịrụ ọrụ na gburugburu ọjọọ.
Loosness dị mma, igwe nwere ike na-akpaghị aka na-eri nri na-enweghị ntuziaka ọrụ.
Ọ nwere ezigbo nro, nke kwesịrị ekwesị maka traction, ịdọpụ, eriri na ojiji ndị ọzọ.
Aha ngwaahịa Electro-kpaliri ígwè waya eriri
Ihe onwunwe Carbon ígwè 45 #, 55 #, 60 #, 70 #
Ogologo 1000mm / ukwu, 2000 mm / ukwu, 3000 mm / ukwu, ma ọ bụ dị ka ihe ị chọrọ
ike ọdụdọ 1470,1570,1670,1770,1870,1960,2160N / MM2, IPS, EIPS, EEIPS
Nkeji Akinggbaji Ibu Ibu
Nke gara aga: Eriri waya nchara nke nwere eriri isi
Osote: Galvanized ígwè waya eriri
Eriri igwe anaghị agba nchara Waya eriri, Igwe anaghị agba nchara Waya eriri ịkwanyere ntekwasa, Steel Waya eriri kpaliri, China rụpụta kpaliri Steel Waya eriri, Vkwanyere ntekwasa kpaliri Steel Waya eriri, Electro kpaliri Steel Waya eriri,